U-Sony uyaqhubeka nokusebenza kwi-OLED ngee-TV zayo ze-2018 | Iindaba zeGajethi
I-Sony yinkampani ehloniphekileyo ngenxa yezizathu ezininzi, umgangatho wezinto zokusebenza kunye nezixhobo zayo, ezihamba kunye neendlela eziyilo zincinci, ziyivumele ukuba ibeke njengowona mveliso omkhulu wekhompyutha. Nangona kunjalo, kancinci kancinci uyaphulukana nomhlaba kwiindawo ezininzi ebeyinkokeli engenakuphikiswa: Umnxeba; Umfanekiso kunye nesandi; Kufotwa ...
Kungenxa yoko le nto besebenza nzima ukwakha imeko-bume yemveliso efanelekileyo ngokugqibeleleyo. Ngeli xesha le-2018 CES Banike uluhlu lwabo olutsha lweethelevishini eziphezulu ze-2018, ezijolise ikakhulu kwi-Android TV, itekhnoloji ye-HDR 10 kwaye kunjalo nenkqubo ye-OLED.
Le yindlela abasenze ngayo ukuba sisondele kwiiphaneli zabo ze-OLED ezingama-55 kunye nee-intshi ezingama-65 ngokukhethekileyo, kodwa iiphaneli zayo ayisiyiyo kuphela inqaku lokuqaqambisa, kwaye kukuba basikhumbuze ngobubele ukuba uluhlu lwabo lwe-Smart TV lusebenza nge-Android TV, eyona nkqubo ivulekileyo kwaye igubungela ezona zinto zinokwenzeka, ngaphandle kwento yokuba iTizen yakwaSamsung ibonisa ukukhanya kwaye isebenze ngakumbi kwimisebenzi yemihla ngemihla. Nangona kunjalo, isandi besisoloko siyinto ekufuneka ibalaselisiwe yinkampani yaseJapan, yile ndlela basiqinisekisa ngayo ukuba oomabonakude babo baya kukhatshwa yinkqubo engu-3.1 Crystal Sound, izithethi azisayi kuphinda zibe yindawo engathandekiyo kamabonwakude.
Ezi televishini zinesisombululo se-4K kwaye ngokuqinisekileyo i-HDR 10 iya kuba phakathi kwe-5.500 kunye ne-6.500 ye-euro, engazifanelanga zonke iipokotho, kodwa kwezona gourmets zingenza ngenye indlela, inyani. Nangona kunjalo, Uluhlu olufikelelekayo olubizwa ngokuba yi-XF90 luza kuqala phakathi kwe-49 kunye nee-intshi ezingama-85, zonke zikwakhona ne-Android TV, iDolby Vision HDR kunye noMncedisi kaGoogle., ngaphandle kwamathandabuzo siphambi koomabonakude bexesha elizayo. Siza kubona ukuba uluntu luphendula njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » U-Sony uyaqhubeka nokusebenza kwi-OLED ngee-TV zayo ze-2018
U-Byton ubonisa imoto yakhe yombane yexesha elizayo (nevidiyo)